अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितलाई पाकिस्तानले पठायो खाद्यान्न - NepalWatch
पाेलिसी डाइलग २०२२
अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितलाई पाकिस्तानले पठायो खाद्यान्न
Previous News २०७९ असार ११ गते १२:५५
नासाले किन माग्यो चन्द्रमाको धुलो र साङ्ला ?
नेपालवाच २०७९ असार ९ गते १२:५५
काबुल । अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितहरुका लागि पाकिस्तानले सहयोगको घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सो कुराको जानकारी गराएको हो ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयद्धारा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार ती सहायता सामग्रीहरुमा टेन्ट, लत्ता कपडा, खाद्यान्न र औषधि रहेका छन् ।
ती सामग्रीहरु बिहीबार नै अफगानिस्तान पुर्याइने तयारी गरिएको पनि प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । अफगानिस्तानको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने खोस्ट सहरनजिकै बुधबार बिहान आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी एक हजार जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको हो ।
खोस्ट प्रान्त अन्तर्गत पर्ने स्पेरा जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी बर्माला, जिरुक, नाका र गायन जिल्ला पनि धेरै प्रभावित भएका बुधबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको थियो ।
भूकम्पमा परी अहिलेसम्म एक हजार ५०० भन्दा बढी घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भूकम्पका कारण धेरै ठाउँका हजारौं भवन तथा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । स्थानीय समयानुसार विहान १.३० बजेतिर भूकम्प आएको हो ।
घटनास्थलबाट गम्भीर अवस्थामा घाइते रहेकाहरुको उद्धार गरिएको र तथा पुरिएका वा थुनिएकाहरूलाई उद्धार गरेर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धारका लागि दर्जनौ उद्धारकर्ता पनि परिचालित छन् ।
अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाले जनाएअनुसार भूकम्प ६.१ म्याग्निच्युडको रहेको थियो । तालिवान सरकारका प्रवक्ता जाबिउल्लाह मुजाहिदले भूकम्पबाट पिडीतहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
जिदानले छाने कतार विश्वकप जित्ने ३ दाबेदार टोली
रवि लामिछानेको पार्टी घोषणाको साइतबारे के भन्छन् देउवाका ज्योतिषि ?
नेकपा फुटमा ९ नेता जिम्मेवार छौं, ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्दा प्रचण्ड मान्नुभएन : वामदेव
इच्छाराजलाई छुटाउन वकिलमार्फत न्यायाधीश राजकुमारलाई दुई करोड घुस !
नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवस्था, अभ्यास र चुनौती (भाग १)
वाग्मतीमा माछा खोज्दै ‘धराने बा’ !
रविले खोलेको पार्टी गैरकानुनी छ, अयोगले दर्ता गर्न मिल्दैन : सूर्य थापा
को हुन् रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ढकाल ?
ओस्लो नाइटक्लबमा गोली चल्यो
चीनको ग्वाङ्सीमा भारी वर्षा, ३८ हजारभन्दा बढी प्रभावित
बहुभाषिक नाट्य उत्सव शुरु
सिरहामा गोली चल्यो, एकजना घाइते
बझाङमा जिप दुर्घटना : चालकसहित ६ जना घाइते
प्रधानमन्त्रीद्वारा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर
गायक राईले दिए मेयर साम्पाङलाई बुद्धको मुर्ति
भएका १९ विमानस्थल अलपत्र, तैपनि थप गर्ने चटारो
अब कति बजेट पाउँछन् प्रदेश र स्थानीय तहले ?
जहाज हराएको घटना : मृत्युको पुष्टि नभइ मुख्यमन्त्रीदेखि मेयरसम्मले दिए श्रद्धाञ्जलि !
पूर्वप्रशासकका नजरमा यी हुन् काठमाडौं महानगरका विकृति र बालेनका चुनौती
महिनावारीकाे विज्ञापन संसार : सय वर्षमा बदलिँदैछ मानसिकता